Mahalasa saina ihany | 102 KARA
Mahalasa saina ihany
Tamin’ny faraparan’ny taona lasa dia nananika ny renivohitra ny andiam-BALALA..
Nisidinany sy norakofany daholo tamin’izany ny toerana manan-tantara teto Antananarivo :
Hevero ange fa avy eny ambonin’ny rovan’i Manjakamiadana izy no nisidina ny Lapan’Ambohitsorohitra etsy Antaninarenina, dia nanivatsiva ka nipaka hatreny amin’ny Lapam-panjakan eny IAVOLOHA;
Nimenomenona avokoa ny tantsaha satria namela takaitra tamin’ny fambolena ireny VALALA irey;
Dia samy nirary daholo ny rehetra mba ho lasan’izay ny ratsy rehetra .
Nanome toky ny Fitondram-panjakana fa mba tsy hisy intsony ny fahatapahan’ny jiro na ny delestage tamin’ny faran’ny taona ka andraisana am-pifaliana ny taona 2015.
Tsy izany anefa no niseho, fa vao tsy nigadona akory ny misasak’alina dia maro ny tanàna manerana ny Nosy no voatery nifaly sy nitsinjaka tao anatin’ny aizina, , ary dia anisan’ny tezitra sy vinitra mafy tamin’izany i Toamasina.
RATSY FITSIDIKA NY TAONA 2015 satria ankoatra ny MOSARY na ny KERE izay mitohy any amin’ny faritra atsimo, dia maro ny faritra tondra-drano noho ny habetsahan’ny rotsak’orana .Tsy mitsaha-mitombo ny TRA-BOINA.
Ary dia ny fiainan’ny vahoaka mihintsy no miha-MITOTONGANA andro aman’alina.Ny fitadiavam-bola efa sarotra nefa dia MISONDROTRA izay tsy izy koa ny vidim-piainana.
Raha tsy hiresaka afa-tsy ny SAKAFO isika dia nisondrotra be ny vidin’izany :
Raha 400 na 500 ariary ny kilaon’ny karaoty roa volana lasa, dia efa mihoatra ny 2000 ariary izy amin’izao fotoana nizao
Raha 500 na 600 ariary ihany koa ny voatabia tamin’izany, dia efa mihoatra ny 2000 ariary mahery izy ankehitiny. Tsy mahavidy voatabia intsony ny mpanao hotely ka voatery mividy voatabia amin’ny boaty, kanefa dia matsora sy zara raha misy tsirony, hoy izy ireo ny sakafo amin’izany;
Eny amin’ny tsenan’ANOSIBE indray raha 15 na 20 ny fiara vaventy no tonga isa-maraina mitondra ny anana sy sakafo hafa tany amin’ny roa volana lasa, dia tsy misy afa-tsy 5
sisa no miakatra amin’izao fotoana izao.
Rehefa natao ny fahadihadiana dia nilaza ny tantsaha mpamokatra fa vokatry ny rotsak’orana be loatra no nanimba ny- voly ka nampananosarotra ny raharaha rehetra.
Izany zava-miseho rehetra izany no mahatonga ny maro hilaza hoe : MAHALASALASA SAINA ihany ny zava-mitranga ankehitriny, ary dia misy ny mampionon-tsaina hoe : ka atao hoana re va izany no TORA-BATO avy any an-danitrra e ! Ny hafa kosa anfa milaza hoe sao dia efa FAMBARA hafahafa ihany izany loza rehetra izany…
24 février 2015 - 19 h 47 min Social 1277 vues